Iingcebiso xa kuphunyezwa i-LADM-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2016 cadastre, Okufumaneka, egeomates My, UkuCwangciswa kweziThili
Kwiiprojekthi ezininzi endiye ndazithatha, ndaye ndangqina ukuba ukudideka okubangelwe yi-LADM akuyomfuneko ukuba kunxulunyaniswe nokuyiqonda njengomgangatho we-ISO, kodwa ekuhlukaniseni ubungakanani bayo bengqondo kwimeko yayo yoomatshini. Ngamanye amagama, indlela yokuyisebenzisa.
Kufuneka icace gca ukuba i-LADM ayisiyomgangatho oqhelekileyo we-ISO, njengoko inokuba ngumgangatho wolawulo lweemethadatha (i-ISO-19115), ukunika umzekelo, okanye umgangatho wokuqwalaselwa kunye nemilinganiselo (ISO-19156). Ziyafana ngengqondo yokuba zisetyenziswe kuqeqesho olukhethekileyo, akukho namnye kule migaqo mibini uya kuba nakho ukuqonda umsebenzisi ongeyiyo i-geomatist enikezelwe kufundo oluhle lwemimandla enxulumene noko kunye nophando lwe-geofumed; nokuba uyayazi indlela yokwenza iifreyimu okanye imitha ngesikhululo esipheleleyo; uqeqesho luhlala luyimfuneko ukwazi ukuba ungawuphumeza njani umgangatho we-ISO.
Umbono oqhelekileyo we-ISO udinga ukulawula ubuncinane (ishishini) yintoni eyenza umgangatho ISO-19152 eyaziwa ngokuba yi-LADM kunzima kakhulu ukuphumeza; kuba ulawulo lomhlaba luyinkalo apho kungenelela khona iinqununu ezizodwa, umsebenzi wokuba ufikelele kwiiyunivesithi ezimbalwa uhanjiswe nje ngolu hlobo.
Ukwazi i-LADM kungaphezulu kokuqonda ukuba iiphakheji ze-UML, iiklasi, kunye neendlela ezingaphantsi zisebenza njani; Kuyimfuneko ukwazi imeko yolawulo lwamalungelo okwenyani; Zombini zivela kwicala lobhaliso kwaye zisuka eCadastre kunye nemephu yeemephu, umthetho wabucala, umthetho woluntu, iindleko zomthetho nezolawulo. Endaweni yokufunda indlela yokuguqula ubhaliso lube yi-RRR, i-LADM ifuna ukuba kwenziwe iinzame ngokulula ngangokunokwenzeka, ukuze kubekwe emgangathweni oko sele kwenzekile kubomi bokwenyani, imigaqo abayifumeneyo ngokomxholo nomthetho wesizwe, ukusukela Le RRR sisiphumo kuphela somyolelo wamaqela otolikwa ngummeli-zincwadi, owaphumeza umbongo ngokwenza isivumelwano, esasihamba kunye nolwazi olwaluqondwa sisiqingatha kwisatifikethi se-cadastral, nto leyo etolikwa kukuba yenziwe ngokwenyani ebonakalayo, kwaye, emva komsebenzi onzima wokutolika kunye nokukhumbuza ngengqondo iimfuno, umntu ofanelekileyo wayeyalela ukuba ibhalwe ngumabhalana, ukuze ifikelele kumbhalisi ekufuneka ezame ukutolika kwakhona, oko kubhalwayo ngumabhalana, ngubani otolike isiqinisekiso, otolike i-notary, otolika ukuthanda kwamaqela, ukuba atyikitye kubhaliso okanye ukwala ... apho ukuba kukho zonke ukukhohlela kwakuphosakele kutoliko lwakhe!
Ukumodareyitha yenye yemiceli mngeni eyathethwa zii-geofumados ze-Beyond Catastro 2014 emva phaya ngonyaka we-1994, nto leyo namhlanje iza kuba yinto eqhelekileyo. Babenyanisile ngokunyanisekileyo, kwaye nangona ukumodareyitha sisenzo sengqondo esulungekileyo, balibale ukuba le yeyona nto ingacacanga ebantwini. Ukumodareyitha kubandakanya ukwenza uthethathethwano phakathi kweengcali zeshishini: i-notary, i-surveyor, i-geomatist, i-surveyor, irekhoda, ekufuneka ifunde i-UML esisiseko; kunye nabasebenzisi beekhompyuter ekufuneka behle ezantsi ukuze baqonde ubomi bokwenyani bezinto abazama ukuzenza.
Ukuqonda ukulawulwa komhlaba kuthethwa ukuba uyazi malunga nemigaqo yokubhalisa enendlela yonke, ubuncinane kwinxalenye enkulu yehlabathi lasentshona:
Umgaqo Uthandaza, nto leyo ethintela wayithathela isithintelo okanye ubutyala uhlobo yakhiwe ngokuzenzekelayo, ngaphandle kokuba umthetho, umgaqo yemvume leyo lithi umthetho Kwadlula nkongolo wesizwe okanye igunya onoxanduva ukuze zibe njengesilumkiso okanye isaziso esisilumkiso, isimiso emphakathini ebonisa ukuba nawuphi na umsebenzisi kakuhle kufuneka bazi ukuba mnyinyiva imigodi okanye indawo kulawulo ezizodwa kuchaphazela ubunini babo, ukusetyenziswa okanye umsebenzi, lo okukhethekile into eyohlula amandla zobhaliso umhlaba, umgaqo kobhaliso leyo ithetha into kagunyaziwe kufuna ukudlula kwemali ukuze isakhono ezisemthethweni ... njalo-njalo ukuguqula indawo esemthethweni kwenkqubo imithetho lula LADM elide umbongo icebo lesenzo esilunzima ukuchaza ukuba unesiprofayile esisigxina se-UML okanye i-database ukukhwehlela komzimba; ukuthatha ukuba inkqubo-nkqubo, imithetho, iinkqubo kunye nemigaqo kufuna ngaphezu ngokuba yimbongi.
Emva kwentetho yam e-Agustín Codazzi Institute ngaphakathi kwesakhelo se-ICDE kunye nomboniso wam kule veki kwilizwe lase-Central America, ndiza kuba nakho ukulandela lo mbandela. Okwangoku iimpendulo zimbala omnyama nomhlophe:
Ukuphunyezwa kwe-LADM kutshintsha indlela esiyibhalisa ngayo?
Phumeza oko. Yiqonde ngokuyinxalenye. Yenze ngomatshini, ngokuqinisekileyo ewe.
Ngaba kuyimfuneko kubasebenzisi bendawo yendawo (ishishini) ukuba bazi i-LADM?
Yiqonde ewe. Uyenza njani ... ayinyanzelekanga.
Ingaba inkqubo entsha ingaqulunqwa ngaphandle kokuthatha i-LADM?
Ngaba kuyimfuneko ukutshintsha umthetho okanye isiseko sesikhungo sokuphumeza i-LADM?
Ngaba i-LADM imele ibe yi-ISO?
Emva kokubona izixhobo ezingafaniyo, ubunzima bokudityaniswa kwerejista kunye ne-cadastre, kunye neendleko eziphezulu zokungahambelani, ngokuqinisekileyo kufanele ukuba kwakukudala ukho. I-LADM inceda ukugcina ishishini, elingaze liguquke, nangona isixhobo kufuneka siphinde sibuyiselwe yonke iminyaka eli-10.
Ziziphi iimanyathelo zokuqonda i-LADM?
Funda ngaphaya kweCastastro 2014, uqonde inkqubo ye-cadastral, uqonde inkqubo ye-notarial, uqonde inkqubo yobhaliso, uqonde umthetho okhethekileyo wolawulo, utolike i-ISO-19152 ngokusekwe koku, funda ngamava, okubi nokuhle ngaphambi kokufunda ...
Ziziphi na amanyathelo okulungelelanisa iprofayile yeLADM?
Thatha iprofayili yohlobo oluqhelekileyo, yahlulahlule kwii-quadrants ezine, hlala abantu abasuka kwindawo yomthetho ukwakha i-BA_Unit class, hlala abantu be-cadastre ukwakha indawo kunye neetopographic class, hlala bobabini ukwakha ubudlelwane babucala bomthetho, idilesi uwiso-mthetho lomthetho woluntu kunye nokwakha ifayile kunye nenkqubo, ukujongana neminye imithetho ngokuthe chu, ukwenza lula umthombo.
Ziziphi iimanyathelo zokuphumeza i-LADM kwinkqubo entsha?
Ukumisela umgangatho kwiprofayili enengqiqo, kulula ngakumbi. Yakha iprofayili ebonakalayo, sebenzisa isixhobo solawulo lwentengiselwano kunye noguqulelo, ulungelelanise iinkqubo, uphuhlise okanye uhlengahlengise isixhobo ngendlela egcina umjikelo wobomi ... ukuba ukhetha ukutshintsha iodolo ngokusekwe kwimeko yomgaqo welizwe.
Ungayibona phi imizekelo yokuphunyezwa kwe-LADM kumongo waseSpeyin?
Ukuba ufuna ukubona umthambo wokuqala kunye neCCDM ngaphambi kokuba ubizwe ngokuba ngumgangatho we-ISO-19152, kufanelekile ukubona iSINAP eHonduras. Ayisiyiyo kuphela isiXhobo esiQinisekisiweyo seRegistry yeNkqubo yobuchwephesha, kodwa nomthetho onike ubomi kumthetho wepropathi nomthetho wokusetyenziswa komhlaba. Ngexesha eliphakathi, kufanelekile ukubona ukuvela kwe-SURE, eyinkqubo eqhubekayo phantsi kobambiswano lukarhulumente nolwabucala, ngokunokwenzeka kunye bolckchain.
Ukuba ufuna ukubona isixhobo sikamasipala esivumelana ne-LADM, ungabona i-SIGIT kwindawo yasePuerto Cortés, i-Omoa Puerto Barrios phakathi kweGuatemala neHonduras, ngesixhobo sewebhu somthengi kwi-OpenLayers, umaleko wecadastral onokutsalwa kunye nokubhaliswa kwepropathi kugxilwe iziko elidibeneyo lequmrhu lesizwe. Nangona bekunzima ukuba kuphunyezwe njengoko kufanelekile, imodeli yexabiso elilinganisiweyo, elinokuthi lizise iziqhamo ezisondeleyo kwimeko ye-El Salvador.
Ukuba ufuna ukubona sisixhobo yesondlo cadastral local iinkonzo GML / WFS nge inkqubo yesizwe, ukuba uyakwazi ukubona SIT kaMasipala Association zooMasipala ka Honduras, phambili kwinqanaba client QGIS, kwakunye neminye imifuno ukuba ukusebenzisana ukuya BentleyMap V8i ngaphandle I-model.
Ukuba ufuna ukubona inkqubo ekuphunyezweni, ethembise kakhulu, phantse njengaye uThixo ayenenjongo, jonga amava okwangoku e-Agustín Codazzi Institute kunye ne-Superintendence ye-Registry kunye neeNarari, ipatanizada style yaseColombia. Sebenzisa i-INTERLIS ukukhawulezisa ukumiliselwa, umceli mngeni olungileyo ovela kwizixhobo ezivulekileyo kunye nokuhlala kwe-ESRI kunye ne-IDE esebenza njengeNdawo yoLawulo loMhlaba.
Ukuba ufuna ukubona umsebenzi othembisayo, oza kuthatha ixesha kodwa ekugqibeleni uya kufumaneka ngeendlela zokutshisa, ndincoma ukulandela ukuphuhliswa kwe-SIICAR2 eNicaragua.
Yaye ukuba ungathandabuzeki ... kukho i-imeyile yam.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Bentley Systems yazisa Udliwano for 2016 iphefumlelwe
Post Next Ushicilelo lweMicrostation CONNECT-Kuya kufuneka siziqhelanise nojongano olutshaOkulandelayo »